खेतदेखि भान्सासम्म बिचौलियाको बिगबिगी, ३ गुणा कमिसन
समाचार उपभाेक्ता कृषि
रमेश भारती काठमाडौं, २८ फागुन
कृषक र व्यापारीको बीचमा बसेर बिचौलियाले तरकारी तथा फलफूलमा कमिसन खाने गरेका छन् । कृषक र कृषि व्यापारीका बीचमा बसेर बिचौलियाले ३ गुणासम्म नाफा खाने गरेको तरकारी तथा फलफूल व्यवसायीले बताउँदै आएका छन् ।
लामो समयदेखि काठमाडौंस्थित टुकुचा तरकारी बजारमा व्यापार गर्दै आएका एक व्यापारीका अनुसार कृषकसँग सिधै तरकारी किनेर बेच्न सक्ने अवस्था छैन । तरकारी तथा फलफूल व्यापारीलाई बिचौलियाले कृषकका खेतसम्म पुगेर खरिद गर्न नदिने गरेको ती व्यापारीले बताए ।
‘कृषकहरूबाट तरकारी खरिद गर्दा फरक फरक मूल्य पर्छ । मूल्यमा एकरूपता छैन । कृषकसँग सिधै कृषिका उत्पादित सामग्री खरिद गरेर बेच्न पाउँदा ५० प्रतिशत सस्तो तरकारी तथा फलफूल बजारमा पाइन्छ’, ती व्यापारी भन्छन्, ‘कृषक र व्यापारीका बीचमा दलाल गर्न बिचौलियाको समूह छ । त्यो बिचौलियाको समूह कृषकको खेतबारीदेखि व्यापारीको गोदामसम्म पुग्छ ।’
बिचौलियाले कृषक र व्यापारी दुवैबाट कमिसन लिएर तरकारी र फलफूलमा सिण्डिकेट रहेको उनको भनाइ छ ।
कृषकका घरघरमा तरकारी र फलफूल किन्न बिचौलिया पुग्छन् । यसरी किनेर ल्याएको तरकारी, फलफूल व्यापारीसँग ३ गुणा फाइदा राखेर आफूलाई बेच्ने गरेको व्यापारीले नै बताउँछन् । यसका कारण बजारमा एउटै तरकारीको मूल्य ठाउँपिच्छे फरक हुने गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।
काभ्रे र धादिङमा कृषकबाट ४० रुपैयाँमा लिएको टमाटर उपत्यकामा १ सय २० रुपैयाँ उपभोक्ताले किन्न बाध्य छन् । कृषकबाट उपभोक्तासम्म आइपुग्दा उत्पादित तरकारी र फलफूलको भाउ ३ गुणाले वृद्धि हुन्छ ।
उपत्यकाभित्र नै ३० देखि ४० रुपैयाँमा कृषकसँग किनेको बोडी कालीमाटी तरकारी हुँदै खुद्रा बजारमा पुग्दा १ सय १० रुपैयाँ पुग्ने गरेको टोखाका एक कृषकले बताए । ‘बिचौलियामार्फत् तरकारी र फलफूल व्यापार हुँदा कृषक ठूलो मारमा परिरहेका छन् । बिचौलियाका कारण उपभोक्ता पनि महँगो तरकारी किनेर खान्न बाध्य छन्’, उनले भने, ‘काठमाडौंमा भन्दा ललितपुर र भक्तपुरमा तरकारी फलफूलको मूल्यमा धेरै फरक पर्छ । काठमाडौंमा ६० रुपैयाँमा पाउने तरकारी भक्तपुरमा ८० रुपैयाँसम्म पर्छ । तरकारीको मूल्य खुद्रा व्यापारले तोकेर बेच्ने गरेका छन् ।’
यसैगरी उपत्यकामा पनि तरकारी मूल्य फरक छ । उपत्यका भित्री र बाहिरी बजारमा तरकारी तथा फलफूलको मूल्य फरक फरक हुने गरेको कृषकले गुनासो गर्छन् । कालीमाटी आसपासमा १ सय २० रुपैयाँमा बिक्री हुने प्याज गौशाला, सिनामङ्गल र उपत्यकाका अन्य बजारमा १ सय ३० रुपैयाँसम्म पर्छ ।
यस्तै, काउली कृषकबाट ३० रुपैयाँमा किनेर बिचौलियाको जालोमा घुम्दै खुद्रा व्यापारीसम्म पुग्दा १ सय ३० रुपैयाँसम्म मूल्य तोकिन्छ । एउटै सामानको प्रति किलो २५ रुपैयाँसम्म मूल्य फरक पर्ने गरेको कृषकै भनाइ छ । यसरी व्यापारले कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले तोकेभन्दा धेरै मूल्यमा तरकारी फलफूल बेचेको विषयमा भने समिति अनभिज्ञ छ ।
बिचौलियाको जालो तोडेरै छाड्ने र कृषकबाट उत्पादन भएको सामान बजारमा स्वतन्त्र रूपमा बेच्न वातावरण बनाउने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरिबहादुर केसीले बताएका छन् ।
तर, प्रवक्ता डा. केसीले भनेजस्तो बिचौलियाको जालो तोड्न सहज देखिँदैन । पछिल्लो समय कृषि क्षेत्रमा बिचौलियाको सञ्जाल झाँगिदै गएको छ । कृषि मन्त्रालय कृषकलाई उत्पादन भएका तरकारी बजारसम्म ल्याउन वातावरण बनाउन नयाँ संरचना बनाइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. केसीको भनाइ छ ।
३ तहका बिचौलिया
तरकारी र फलफूल खेती गर्ने किसानसम्म बिचौलिया पुग्छन् । बिचौलियाले कृषि र व्यापारीका बीचमा बसेर ब्रोकर जस्तै तरकारी र फलफूलमा अग्रिम पेस्की दिएर कृषकले उत्पादन गरेका वस्तु खरिद गर्ने गरेको व्यापारले नै बताउँछन् ।
तरकारी उत्पादक कृषकबाट सिधै उपभोक्तासम्म पुग्न सक्दैन । स्थानीय तहमा तरकारीका बिचौलियाले कृषकसँग तरकारी किनेर (सङ्कलन) गर्छन्, कृषकसँग किनेको तरकारी (थोक खरिदकर्ता) व्यापारीलाई बेच्छन्, थोक खरिदकर्तासँग पुनः बिचौलियाले तरकारीसँगै फलफूल किनेर (मन्डी) व्यापारीलाई बेच्दै आएका छन् ।
कृषकसँग बिचौलियाले अत्यन्तै थोरै मूल्यमा तरकारी किन्ने गर्छन् । कृषकबाट किनेर ल्याएको तरकारी त्यही उत्पादन गर्ने कृषकले खुद्रा व्यापारीसँग आफुले बेचेभन्दा धेरै फरक पर्ने गरेको उनीहरू बताउँछन् ।
नेपालकमा समग्र कृषिको अवस्थालाई हेर्दा कृषि उपज वृद्धिका लागि वातावरण, उपजको भण्डारण, संरक्षण, बजार व्यवस्था, कृषकले पाउने मूल्य जस्ता कुरामा सरकारको ध्यान गएको छैन । यसका कारण कहिले उत्पादन नै कम हुने त कहिले उत्पादन समयमा बिक्री नभएर खेर फाल्ने अवस्था छ । तरकारी खेती गर्ने कृषकले यस्ता समस्या अझ बढी भोगिरहेका छन् ।
तरकारी बाली सर्वेक्षण, २००९ ले नेपालमा वार्षिक ४५ अर्ब रुपैयाँको तरकारी उत्पादन गरिन्छ । सर्वेक्षणका अनुसार नेपालका ७० प्रतिशत घर परिवार कुनै रूपमा भए पनि तरकारी खेती गर्छन् ।
कृषि गणना २०६९ ले नेपालमा २ लाख ४५ हजार हेक्टर जमिनमा तरकारी खेती हुने गरेको छ । यति जमिनमा तरकारी खेती गर्दा ३३ लाख टन उत्पादन हुन्छ । नेपालका किसानमध्ये १८ प्रतिशतले मात्र व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती गर्दै आएका पाइएको छ ।
बजार अनुगमन नहुँदा मनपरी मूल्य
बिचौलियका कारण तरकारी, फलफूल, कृषिका सामग्रीको मूल्य दैनिक वृद्धि भइरहेको कृषकहरू नै बताउँछन् । यसको मारमा कृषि र व्यवसायी दुवै परिरहेका छन् । आफूले उत्पादन गरेको सामग्री महँगो मूल्यमा किनेर खान बाध्य हुनुपरेको कृषककै गुनासो छ ।
सबैको भान्सामा दैनिक आवश्यक साग, सब्जी, बन्दा, टमाटर, भण्टालगायतका तरकारीमा बिचौलियाले कमिसनका लागि व्यापार गर्दै आएका छन् । उपभोक्ताले आवश्यक परेपछि बढी मूल्य तिरेर भए पनि तरकारी, फलफूल किनेर उपभोग गर्न बाध्य रहेको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले बताए ।
समय समयमा बजार अनुगमन नहुँदा कृषकहरू तरकारी खरिदमा ठगिरहेका छन् । कृषक मात्र होइन, उपभोक्ता पनि तरकारीमा दैनिक ठगिने गरेको मञ्चका अध्यक्ष बानियाँले बताए ।
‘दैनिक उपभोग्य वस्तु बेच्ने किराना पसल र होटलमा वर्षमा २ चोटिसम्म बजार अनुगमन भए पनि तरकारीको गुणस्तर र मुल्यबारे अनुगमन हुने गरेको छैन । उपभोक्ताहरूले नाप, तौलसमेत जाँच गरिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्’, उनले भने, ‘कृषि मन्त्रालयका मन्त्रीदेखि सामान्य कर्मचारीलाई राम्रो थाहा छ तरकारीमा कृषकदेखि उपभोक्ता ठगिएको तर उनीहरू मौन छन् ।’
प्रकाशित मिति: बुधबार, फागुन २८, २०७६, ०२:३१:००